Fizahan-tany momba ny fizahan-tany Saodiana: Etazonia- Nambaran'ny Ventur Saudi Arabia ao amin'ny JTTX Jeddah
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Arabia Saodita » Fizahan-tany momba ny fizahan-tany Saodiana: Etazonia- Nambaran'ny Ventur Saudi Arabia ao amin'ny JTTX Jeddah
The Fampirantiana momba ny dia sy fizahantany iraisam-pirenena Jeddah JTTX is fampisehoana varotra fitsangantsanganana lehibe indrindra any amin'ny Fanjakana Saudi Arabia.
Miaraka amin'ny fisokafan'i Saudi Arabia amin'ny firenena andrefana amin'ny fampahafantarana ny fizahan-tany fialantsasatra amin'ny fanjakana dia fiovana lehibe eo amin'ny politika izany ary manokatra fotoana vaovao mahavariana ho an'ny sehatry ny fizahantany.
JTTX no sehatra eo an-toerana mitarika ny sehatry ny fizahan-tany rehetra, mampiseho toerana maro samihafa sy serivisy misahana ny fizahan-tany.
Fotoana iray tsy manam-paharoa ho an'ireo mpampiranty mba hifaneraserana, hifampiraharaha ary hitarika orinasa amin'ny varotra, ary koa hanolotra ny serivisin'izy ireo mivantana amin'ny besinimaro.
Ny JTTX dia manasongadina ny maha zava-dehibe ny Travel sy ny fizahan-tany ho an'ny toekarena eo an-toerana, fa ny tsenan'ny fizahan-tany Saudi Arabia kosa dia iray amin'ny fitomboana haingana indrindra eran-tany. Raha ny statistikan'ny UNWTO farany teo dia nahita fitomboana 14% ny Fanjakana tao anatin'izay taona lasa izay, izay mpanao kalitao tsara indrindra eran-tany.
TravelNewsGroup dia tompon'ny eTurboNews , ary teo ambany fitarihan'ny filoha sy ny CEO Juergen Steinmetz, dia niara-niasa tamin'i Raed Habbis, filohan'ny RHH any Saudi Arabia, namorona ny Vondrona fizahan-tany Saodiana.
Dr. Peter Tarlow dia hitarika ny tetikasa fiofanana momba ny fiarovana sy ny fiarovana ary ny fiarovana ny fizahantany. Dr. Tarlow dia manam-pahaizana malaza manerantany momba ny fiarovana ny dia ary handeha izy izao Safertourism , izay ampahany amin'ny TravelNewsGroup.
Ny vondrona fizahan-tany Saodiana dia vondrona consultant sy marketing momba ny fizahantany manampy amin'ny fahitana sy marketing amin'ny fivoaran'ny fizahan-tany any Saudi Arabia. Vonona hiara-hiasa amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina ny vondrona fizahan-tany Saodiana.
Hanambara ny “Vaovao momba ny fizahan-tany Saodiana” ny STG tsy ho ela, izay ho famoahana ny fizahan-tany sy fizahan-tany eran-tany Saudi voalohany. Vonona hiara-hiasa amin'ny haino aman-jery sy ny fampahalalam-baovao mahazatra ny Saodiana momba ny fizahan-tany Saodiana, miaraka amin'ny trano fandraisam-bahiny, trano fandraisam-bahiny ary ny sehatry ny daholobe amin'ny fampitomboana ny fahitana ny vokatra fizahan-tany Saodiana.
Fiaraha-miombon'antoka i Saudi Saudi News News eTurboNews ary ny vondrona fizahan-tany saodiana. Ny News Saudi Arabia momba ny fizahantany dia eo ambany fitarihan'ny Dr. AbdulAziz Bin Naser.
Raed Habbis HRH Dr. AbdulAziz Bin Naser ary filohan'ny Gaca
Fizahan-tany momba ny fizahan-tany: fanavaozana ny Coronavirus - Mety tsy mahazo miditra ireo mpitsidika
Fampitandremana FAA: Ny fiaramanidina sivily amerikana any Kenya mba hitandrina tsara